पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने विषयमा सांसदहरुको भनाइ | Taja Update
अबको एक हप्ताभित्र मन्त्रीपरिषद् बिस्तार हुन्छ : माधवकुमार नेपाल
सफा नोट मात्रै प्रयोग गर्नु ,राजाको तस्बिर भएका नोट बजारमा नपठाउनु : राष्ट्र बैंक
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व अब भरतपुर महानगरपालिकाले लिने
श्री एयरलाइन्सले थाल्यो काठमाडौं–पोखरा उडान शुरु
सर्बोच्च अदालतले माधब नेपाल पक्षलाई भन्यो,‘लिखित जवाफ दिनु’
सिंहदरबार कात्तिक महिना भित्र सम्पन्न गर्ने गरी पुननिर्माण हुदै
‘सेल्सबेरी’मा नेपाली उत्पादनहरु स्टल संचालनमा
भुमिहिन तथा सुकुम्बासीको समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने गरिने
पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने विषयमा सांसदहरुको भनाइ
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारीता पेशामा प्रवेश गर्नेहरुले परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधानको सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरुले पक्ष विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले पत्रकारीता पेशामा नया” आउनेहरुका लागि लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको प्रावधानको पक्ष विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पत्रकारको परीक्षा लिने जिम्मा दर्शक र स्रोतालाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशमा यो अभ्यास नभएको र अहिले नेपालमा यस्तो अभ्यासनको आवश्यकता नरहेको उहाले बताउनुभयो । पाठक, दर्शक र स्रोतालाई नै छुट दिनुपर्छ । कुन पत्रकारले कस्तो कुरा गर्दैछ भन्ने कुरा पाठकलाई किन नछोड्ने ? यो अनुपयुक्त कुरामा हामीले अभ्यास गरिरहेका छौ । जुन कुरा साउथ एसिया, बेलायत, अमेरिका कुनै पनि देशम छैन् । हरेक कुराको परीक्षण हामीले किन गर्ने ? राष्ट्रियसभाबाट यो पास हुने अवस्था छ तर हामी विरोध गर्छौँ’, उहाले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका बृखेशचन्द्र लालले पत्रकारीतालाई कुनै घेराभित्र राख्न नहुने बताउनुभएको छ । विधेयक स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिता बनाउनका लागि आएको भएपनि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रवधान राख्न नहुने धारणा उहाँले राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, आचारसंहिताको पालना हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मुल कुरा हो । तर यसमा लाइसेन्सको कुराले अलिकति अफ्ठ्यारो हुन सक्छ । पत्रकारीतालाई एउटा सीमा भित्र नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए जस्तो लाग्छ । यसमा राजपा र कांग्रेसले आफ्नो धारणा राखिसकेको छ ।’ यता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद दिनानाथ शर्माले पत्रकारहरुको स्ट्याण्डर’ कायम राख्नका लागि यो प्रावधान ल्याइएको बताउनुभएको छ । पत्रकारको पहिचान र स्ट्याण्डर कायम होस भन्ने हिसाबले यो प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो उपयुक्त र राम्रो भएको बताउनुभयो । विधेयकका विषयमा पहिले पनि धेरै प्रश्नहरु उठेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले प्रश्न उठाउनेहरुको इज्जत माथि उठाउने गरी यो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । जसरी पहिले धेरै प्रश्न उठे विवाद भयो । प्रश्न उठाउनेहरुको चित्त प्रशन्न हुने गरी, इज्जत माथि उठाउने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो । यसले उहाँहरुको स्ट्याण्डर कायम गनर्छ’, उहाले भन्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पत्रकारीता क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने नयाँ व्यक्तिले लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान विधेयक पारित गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समेत यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने बताउँदै आउनुभएको छ ।
नवनिर्वाचित सभामुखको प्रतिवद्धता
नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुख पदको गरिमालाई कायम राख्न विगतमा भएका असल अभ्यास अनुसरण गर्दै अगाडी बढ्ने बताउनुभएको छ । निर्वाचित भएपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै सभामुख सापकोटाल विगतका असल अभ्यासको अनुसरण गरी प्रतिनिधिसभालाई सफलता सम्म पु¥याउने अभ्यास गर्ने बताउनुभयो । जनताको शान्ति, समृद्धि र सुशासनको चाहानालाई सम्बोधन गर्न […]
नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सेवा नपुगेको स्थानहरुमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै
मुलुकका उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग परामर्श गर्नुपर्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
प्रधानमन्त्रीद्धारा नेपाली पोर्टको उद्घाटन
अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कम रहेको पर्यटन मन्त्रीको भनाइ